ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအစာတောင့်များထဲသို့အစေ့များထုတ်လုပ်ရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်းစသည်တို့. ယခုအခါလယ်သမားအမြောက်အများသည်တောင့်ငါးများကိုအစာကျွေးရန်ကုန်ကျစရိတ် နည်း၍ ငါးမွေးစက်ကိုဝယ်ယူလေ့ရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာတောင့်သည်အလယ်အလတ်နှင့်အရွယ်အစားကြီးမားသောငါးမွေးမြူရေးနှင့်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့တွင်သေးငယ်သောရေပေါ်ငါးအစားအစာလုံးလေးပြုလုပ်သည့်စက်ရှိသည်.
ရေပေါ်အစာတောင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ငါးတောင့်ပြုလုပ်သောစက်,ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိုကုန်ကြမ်း၏အစိုဓာတ်အရခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားနှင့်စိုစွတ်သောငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ထဲသို့ခွဲနိုင်သည်. 1. ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားအပူစွမ်းအားအားဖြင့်ပစ္စည်းများအပူ, ဒီရေပေါ်ငါးအစာကျွေးသောစက်သည်ဝက်အူ extruder ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်ရှိမှိုအပေါက်များမှကုန်ကြမ်းများကိုညှစ်ထုတ်ပေးသည်. စက်ထဲမှထွက်လာသောအခါတောင့်များ၏ဖိအားနှင့်အပူချိန်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်, နှင့်အစိုဓာတ်ကိုအငွေ့ပြန်. ထိုအခါပစ္စည်းများမာနနှင့် porous ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူလုံးလေးများဖြစ်လာသည်. လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း, အစိုဓာတ်ကနေနေကြပါတယ် 15 ရန် 20 ရာခိုင်နှုန်း.